संगीतमा रुचि छ ? पाटनमा निशुल्क संगीत तालिम खुल्यो |
संगीतमा रुचि छ ? पाटनमा निशुल्क संगीत तालिम खुल्यो
On: २०७६ भाद्र १० गते, मंगलवार, ०२:३२ बजे प्रकाशित
पाटन दरबार परिसरमा रहेको मङ्गलटोल सुधार सङ्घले निःशुल्क सङ्गीत तालीम प्रदान गरिरहेको छ । समाजमा बढ्दै गएको विकृति तथा धूमपान र मद्यपानको कुलत हटाउन सो तालीमको व्यवस्था गरिएको हो ।
सङ्घ कार्यसमितिका सदस्य श्रेष्ठले पाटन दरबार परिसरका अलावा न्ह कहेद्या गुठीअन्तर्गत ललितपुरका प्रसिद्ध स्थान हरिसिद्धि र लूभूमा पनि शाही भजन सिकाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “मङ्गलबजारको भिन्द्यो लाछीमा ४० जना व्यक्तिलाई महीनावारी पारिश्रमिक लिएर प्रारम्भिक सङ्गीत प्रशिक्षणका अलावा लोक तथा आधुनिक पनि सिकाइरहेको छु ।” -रासस
२०७६ भाद्र १० गते, मंगलवार, ०२:३२ बजे प्रकाशित